Kuwedzera Readership yako | Martech Zone
Kunyangwe iwe uri wekudyidzana blogger kana uchingova neyako blog, imwe yekukura zvinhu zveblog rako zvinoenderana nekugona kwako kusvika kune vatsva vaverengi vasingazive yako blog iripo. Ndinoita izvi kubudikidza nemaitiro akati wandei… maringe nekukosha iwo:
Kutaura kune mamwe mablog, kunyanya kana ivo vari muindasitiri imwechete. Ndinovawana kuburikidza Google Alerts, Tsvaga Blog paGoogle, uye Technorati.
Ini ndinoburitsa yangu RSS feed pane akawanda masosi sezvandinogona, kusanganisira mamwe masayiti uye mumagariro mitambo.
Ini ndinonyorera kune yega yega Webhu saiti 2.0 yandinogona uye ini ndinove nechokwadi chekuti blog kero yangu uye RSS feed kero inogarwa neimwe nzira muprofile yangu.
Ini ndinoshandisa otomatiki ziviso maficha e Twitter (kunyangwe zvichishungurudza kuzivisa kana ndikachengetedza chinyorwa chakamboburitswa).
Ndinotaura pa zviitiko zvematunhu pese pazvinogoneka.
Ini ndinopa yangu blog kero pa mabhizinesi makadhi kune wese wandinosangana naye!
Ini ndinotsigira blogosphere nekuburitsa mahara plugins uye midziyo kuti vanhu vashandise.
Ini zvakare ndinoedza kutsvedza mamwe maLink kune mamwe masayiti, seKnol uye mamwe maWikis.
Chekupedzisira, ini ndinozvipira ku nyora nzvimbo dzevaeni painopihwa uye ini handina kumboramba mukana wekunyora kune hombe webhusaiti painobvunzwa, zvisinei nemubhadharo!
Inenge mwedzi wapfuura, ndakafonerwa na Tarenda Zoo kunyora ikholamu yemwedzi nemwedzi paSocial Media uye Kushambadzira kwenzvimbo yavo. Makumi gumi apfuura, Talent Zoo yakazozivikanwa seimwe yemasangano ekutanga ekushandira makambani ari muindasitiri yekushambadzira. Mumashoko avo:
Sezvo dot-com yakava dot-bhomba, TalentZoo.com yakakura. Ikozvino dhatabhesi repamhepo apo kushambadzira uye kutaurirana mafemu anogona kuona pamusoro pezviuru zana zvichitangazve kubva pama novice kuenda kune nyanzvi. Iyi inzvimbo iyo vanotsvaga basa vanowana mikana yemabasa. Uye TalentZoo.com inochengetedza iyo nyowani, sekuwedzera zvimwe zvinofanirwa-kuverenga zvirimo mumaindasitiri nhau, mafambiro, zano rebasa pamwe nemabhodhi emashoko uye podcast kukwezva vamwe vanotsvaga basa.
Chinyorwa changu chekutanga chinofanira kuburitswa neChitatu chino! Ndiri kutarisira kugamuchirwa kwechinyorwa (zano: indasitiri nyowani / tekinoroji iri kuputika izvozvi zvinoita kuti Vatengesi vawedzere uye vashandise). Ndiri kutarisira zvakare kusvika kune vateereri vatsva kuburikidza neTarenda Zoo! Pasina kupokana vamwe vevaverengi vanozodzokera shure kune yangu blog.
Tags: vashandi vefonimultidomainkudyidzana kwevanhumunharaunda munharaundasolomomamiriro ekubatana kwepamhepo
Iyo Nyowani Bhizinesi "Makadhi" Ari Pano!
Aug 12, 2008 pa 7: 58 AM
Uchishandisa yako runyorwa senge yekutarisa, ini ndakafukidzwa pa #s 1-4. Nguva yekuenda kubasa pa #s 5-8! Kutenda nemazano, Doug.
Aug 12, 2008 na3: 49 PM
Kuongorora kukuru. Ndatenda nemazano. # 3 inguva yekudya, yakazotanga kutanga kushanda pa # 7. Unofanira kuuya nepfungwa nyowani hazvo. Thanks zvekare.
Aug 15, 2008 pa 11: 02 AM
Ini ndinoburitsa mune akati wandei kushambadzira zvinyorwa, kusanganisira zvisere masvondo mapepanhau akatenderedza nyika. Izvo hazvibate zvakananga blog yangu kuverenga, asi zvinowedzera kuverenga kwangu kwese (zvinova zvinopfuura makumi matatu nezana pasvondo).